Cayaaryahan Akram Xasan oo hormuud u ahaa xulka Qaranka wadanka Qatar ku guleysten tartanka koobka Aasiya – Walaal24 Newss
Cayaaryahan Akram Xasan oo hormuud u ahaa xulka Qaranka wadanka Qatar ku guleysten tartanka koobka Aasiya
February 3, 2019	2	By walaal24
Akram Xasan Cafiif oo 22 sano jir ah waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda xirfadda sare leh ee sida weyn isha loogu hayo, waxa uu lambarka 10-aad uga ciyaaraa xulka qaranka ee waddanka Qadar, isagoo kaalin mug lehna ka qaatay guulihii at Qadar ka gaartay tartanka koobka Aasiya oo ay ugu dambeyn Jimcadii koobka ku hanteen.
Mid ka mid ah saddex gool oo ay Qadar ciyaartii finaalka uga badisay xulka Japan ayuu dhaliyay Akram, wuxuu weerarka uga ciyaaraa kooxda Al Sadd, isagoo qaab amAah ah uga soo tagay kooxdiisa Villarreal ee ka dhisan dalka Spain.
Akram waxaa dhalay Xasan Cafiif oo ah ciyaartoy Soomaali ah oo horay uga tirsanaan jiray xulkii qaranka Soomaaliya ee bari samaadkii.
Cabdiqaadir Maxamed Faarax (Biriq), oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya ayaa isagoo BBC-da la hadlayay wuxuu sheegay in Akram aabihiis uu soo ahaan jiray nin si fiican loogu yaqaannay xirfadda kubadda cagta.
“Xasan Cafiif wuxuu ahaan jiray ciyaartoydii qaranka Soomaaliya iyo kooxda Horseed. Wuxuu ahaa weeraryahan aad looga yaqaannay Soomaalia waxaana laga soo xushay ciyaartoydii ka soo jeedday magaalada Kismaayo, anigana waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u yeeshay iney kasoo barbar ciyaaraan”.
Saxan Cafiif ayaa ka ciyaari jiray horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya, isagoo lafdhabarna u ahaa xulka qaranka iyo kooxdiisii horsed.
Dhanka kale, Biriq ayaa sheegay in Akram uu sidii aabihiis u yahay yahay ciyaartoy xirfad sare leh oo mustaqbalkiisu uu ifayo.
“Waa ciyaartooy da’ yar, adduunyada oo dhanna aad ay maanta u daneyneysaa Akram Cafiif. Ciyaartii Fiinaalka koobka Aasiya wuxuu Akram muujiyay ciyaar heer sare ah. Marka runtii waxaan dhihi karnaa rajo fiican ayuu leeyahay heer aad u sarreeya ayuuna ka gaari karaa kubadda cagta adduunka”.
Akram Cafiif ayaa magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qadar ku dhashay 18-kii bishii Nofembar ee sannadkii 1996-kii.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka oo Kormeer ku maray Wasaaradaha Warfaafinta, Tamarta Iyo Haweenka
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo Kormeer ku tagay dhismaha Xabsiga Guud ee Muqdisho oo La Dhamaystiray
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Barlamanka oo xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka Midowga Afrika
Magaalada Hargeysa oo ka da’ay Roob mahiigaan oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Warar hordhac ah oo ka soo baxaya geerida Horjoogaha kooxda Al-shabaab
Guddoomiyaha golaha Shacabka oo Magacabay Guddiga diyaarinta sharciga doorashoyinka Qaranka
Maamulka Puntland oo heshiis la saxiixatay shirkad Dalka shiinaha laga leeyahay
Dowlada Mareykanka oo ka Musaafurineysa muhaajiriin badan oo Dalkooda soo galay
Daawo: Soomaaliya iyo Shiinaha oo kala saxiixday heshiis iskaashi labada Dal u dhaxeeya
Daawo: Madaxweynaha maamulka Puntland oo magaalada Garoowe ku qaabilay Ergayga Midowga Europe